रोचक(interesting fact )
डिसेम्बर २१ तारिख वर्षकै सबैभन्दा छोटो दिन र लामो रात
काठमाडौं । अंग्रेजी पात्रो अनुसार प्रत्येक बर्षको डिसेम्बर २१ तारिख वर्षकै सबैभन्दा छोटो दिन र लामो रात हुने दिन हो । त्यसैले आज(शुक्रबार) पृथ्वीको उत्तरी गोलार्द्धमा वर्षकै सबैभन्दा छोटो दिन र लामो रात हुने बैज्ञानिकहरुले बताएका छन् । पृथ्वीले सूर्यको परिक्रमा गर्दैगर्दा पृथ्वी आफ्नो अक्षमा पनि घुम्ने गर्दछ । पृथ्वीले आफ्नो अक्षमा...
मेक्सिकोकी सुन्दरीलाई मिस वर्ल्डको उपाधि : शृङ्खला अन्तिम १२ बाट बाहिरिइन्
काठमाडौं : मिस नेपाल शृङखला खतिवडा मिस वर्ल्ड २०१८ को अन्तिम १२ बाट बाहिरिएकी छिन्। २०१८ को मिस वर्ल्डको ताज भने मेक्सिकोकी सुन्दरी भेनेसा डिसियानले पहिरेकी छन्। प्रतिस्पर्धी ११८ देशका सुन्दरीहरुलाई पछि पार्दै २६ वर्षीय भेनेसाले विश्व सुन्दरीको उपाधि चुम्न सफल भएकी हुन्। उनलाई गत वर्षकी भारतकी विश्व सुन्दरी मानुषी छिल्लरले ताज...
यस्तो छ १० जना बस्न मिल्ने बाइक
काठमाडौं । एउटा बाइकमा कतिजना वस्न सक्छन् ? दुइ, तीन या धेरैमा पाच । यद्यपि एकसाथ १० जना वस्न सक्ने बाइक पनि प्रचलनमा छ । वस्न मात्र होइन, यसमा १० जना आरामले वसेर कुदाउन सकिन्छ । दुइ एवं एक सिटयुक्त बाइक देखिरहेका हामीलाई उक्त १० सिट क्षमताको बाइक नौलो लाग्न सक्छ । कतिपयले त यस्तो कल्पना पनि गरेका छैनन् होला । तर, आम कल्पना वाहिरको यो कुरालाई...
यस कारण आउँछ पाद
नाक तथा मुखबाट हावा लिँदा तथा छाड्दा कसैलाई मतलब हुँदैन । तर जब कसैले मलद्वारबाट हावा छोड्दछ तब यसले नजिकका मानिसलाई दिक्क पार्दछ र हावा छोड्नेलाई लज्जित बनाउँदछ । कहिलेकाहीँ अझ तिखो आवाज र नमिठो गन्ध सहित आउने यस्तो ग्यास समस्याको विषय नै बन्दछ । तर विज्ञहरुका अनुसार यसरी ग्यास छाड्नुमा लाज मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन । यो त मानिसको पाचन...
तपाईलाई थाहा छ, यी अंग ठूला हुने महिला हुन्छन् औधी भाग्यमानी !
एजेन्सी । हिन्दु धर्ममा महिलालाई सौभाग्यशाली र लक्ष्मीको रूप मानिन्छ । आज हामी महिलाहरूको बारेमा केही यस्ता रहस्य उल्लेख गर्दैछौँ, जो शायद तपाईलाई जानकारी नहुन सक्छ । महिलाहरूको हरेक अंगमा उनीहरूको कुनै न कुनै रहस्य लुकेको हुन्छ । महिलाहरूको हरेक अंगले उनीहरूको स्वभावको बारेमा केही दर्शाउँछ । पुराणमा पनि महिलाहरूको केही...
छोरा जन्माउने चाइनिज सुत्र यस्ताे छ १०० % काम गर्ने प्रविधि
गर्भवती समाजमा छोरा या छोरी नजन्मिएकै कारण कैयौ परिवारमा द्वन्द्व हुने गर्दछन् । यसकै कारण कयै महिलाले मानसिक र शारिरीक यातना भोगिरहेका घट्नाहरु छन् । कतिपय महिलाले यसैको कारण सौता त कतिपयले सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपरेका घटनाहरु भेटिन्छन् । कोही भने सन्तान प्राप्तीका लागि भएभरका अस्पताल, बैद्य, मठ–मन्दिर र तीर्थस्थलमा पुगेर सास्ती...
सोह्रश्राद्धमा जीवित पत्नीकै पिण्डदान !
एजेन्सी । सोह्रश्राद्धमा पितृहरुको सम्झनामा तर्पण तथा पिण्डदान गरिन्छ । तर कयौं पुरुषले सोह्रश्राद्धका अवसरमा आ–आफ्ना जीवित पत्नीकै पिण्डदान गरेका छन् । घटना भारतको महाराष्ट्र राज्यको नासिकमा भएको हो । त्यहाँ सामूहिक रुपमै पिण्डदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । समाचार एजेन्सीहरुका अनुसार सयभन्दा बढी पुरुषले आफ्ना जीवित...
यस कारण शुद्ध ब्राह्मणले प्याज, लसुन र च्याउ खाँदैनन्
हाम्रो समाजमा अझै पनि शुद्ध ब्राह्मण प्याज, लसुन र च्याउ खाँदैनन् । यी कुनै कुराहरु मिसाइएको हुन्छ भनेर कतिपय ब्राह्म्णहरु घरबाहिर पनि खाना खाँदैनन् । तर, धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ किन उनीहरु लसुन, प्याज तथा च्याउ खाँदैनन् भनेर । आयुर्वेदका अनुसार खाद्य पदार्थ तीन खाले हुन्छन् । सात्विक यसभित्र शान्ति संयम, पवित्र र मनको शान्ति जस्ता...
भियतनाममा यौनशक्ति बढाउन सर्पको मासु, रगत र रक्सी !
काठमाडौं । भियतनाममा सर्पको रगत मिसाएको रक्सी र मासु हालेका विभिन्न परिकारहरू खाने चलन छ । त्यहाँ सर्पको मासुले यौनशक्ति बढाउँछ भन्ने लोकमान्यता छ । जथाभावी वनबाट सर्पहरू समातिँदा त्यहाँको पारिस्थितिक प्रणालीमा नराम्रो प्रभाव पर्ने वन्यजन्तुविद्हरू बताउँछन् । जंगलबाट समातेर ल्याइएका सर्पलाई काटिन्छ तर जिवितै राखेर र पछि उमालेको...
अबदेखि रक्सी पिउनेहरूलाई पनि परिचय पत्र !
काठमाडौं(बीबीसी) सेवा प्राप्ति र पहिचानका लागि देखाइने परिचय पत्र अब रक्सी पिउनेहरूले पनि बोक्ने भएका छन् । नेपालमै सम्भवत पहिलो पटक बाजुराको गौमुल गाउँपालिकाले यस्तो अभ्यास भदौ १ गतेदेखि प्रचलनमा ल्याएको छ । गौमुल गाउँपालिकाले प्रचलनमा ल्याएको मदिरा सेवन परिचय पत्रबाट मदिरा सेवनले समाजमा व्याप्त समस्या निराकरणमा सघाउ पुग्ने...
गर्भवतीले खान लागेको सुपमा मरेको मुसा..
काठमाडौं । एउटी गर्भवती महिलाले आफूले खान लागेको सुपमा मरेको मुसा भेटेपछि रेस्टुरेन्टहरूको सञ्जाल भएको एउटा चिनियाँ कम्पनीको बजार मूल्य १९ करोड डलरले घटेको छ । चप्स्टिकले च्यापेर सुपबाट निकालिएको मुसाको तस्बिर सामाजिक सञ्जालहरूमा फैलिएपछि जायबु जायबु रेस्टुरेन्टको शेयर मूल्य एक वर्षको सबैभन्दा न्यून विन्दुमा पुगेको हो । मरेको...
गुजरातमा एक किलो मिठाइको मूल्य ९००० भारु !
एजेन्सी । तपाईले खाएको मिठाइएको मूल्य कति होला ? सामान्यतया हामी ५ ६ सय रुपैयाँ किलोसम्मका मिठाइ खान्छौं । तर एक किलो मिठाइको मूल्य १४ हजार रुपैयाँ (भारु ९०००) पर्छ भन्दा तपाईलाई पत्यार नलाग्न सक्छ । भारतमा ९ हजार भारतीय रुपैयाँ प्रतिकिलो पर्ने मिठाइले धेरैको ध्यानाकृष्ट गरेको छ । गुजरातको सुरतमा ९ हजार भारतीय रुपैयाँ प्रतिकिलोको मिठाइ...
वेलायतमा तीन करोड रुपैंयाँ पर्ने उड्ने शुट तयार
एजेन्सी । वेलायतका एकजना आविष्कारक तथा व्यवसायी रिचर्ड ब्राउनिङले आफ्नो सपनालाई मूर्तरुप दिएका छन् । उनले एउटा यस्तो सूट तयार पारेका छन् जसलाई लगाएर मानिस फिल्मी फेन्टेसीको आयरम्यान जसरी हावामा उड्न सक्छ । ब्राउनिङले दाबी गरेका छन् उक्त शूट लगाएर कुनै पनि मानिस प्रतिघण्टा ५० किमीको रफ्तारमा दूरी तय गर्न सक्छ । यसको मद्दतमा १२ हजार...
दुधालु गोरु ! जहाँ गोरुको दुध प्रसाद भनेर बांडिन्छ
सिन्धुपाल्चोक । भनाई नै छ — गोरु ब्याउँदैने, दुध पनि दिँदैन । तर, यति बेला हेलम्बु गाउँपालिकाको इचोक, पुरानागाउँका सोनाम तामाङको घर पुग्ने जोकसैलाई यो भनाई झुटो लाग्न सक्छ । तामाङ दिनहुँ गोरु दुहुन्छन्, त्यसको दुध गाउँलेलाइ प्रसाद बाँड्छन् । भन्छन् — विहान बेलुकी गरेर एक मानाजति दिन्छ पहिले कहीकतै नदेखेको नसुनेको यो घटनाले स्थानीय...
महिलाको योनी रसबाट बियर !
एजेन्सी । पोल्याण्डको एक बियर कम्पनीले योनी रसबाट बियर उत्पादन थालेको छ । द अर्डर अफ योनी नाम दिइएको कम्पनीले बियर बजारमा ल्याएको हो । यस योनी बियरमा दुई हट मोडलहरु मोनिका र पाउलिनाको योनीको ब्याक्टेरिया प्रयोग गरिएको छ । यौनाङ्गको ब्याक्टेरियाले कुनै हानी नगर्ने चिकित्सकहरुले बताएपछि दुई मोडलहरुको योनीरसबाट बियर उत्पादन थालिएको हो...
रेल चढेर चीन पुगे उत्तर कोरियाली नेता किम
५१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको नयाँ नोट बजारमा आउँदै
औषधिमा मनोमानी, कम्पनीपिच्छे फरक मूल्य